Ihe ederede PJ Taei na Martech Zone |
Edemede site na PJ Tai
PJ bụ onye guzobere na onye isi ala nke Uscreen, ihe niile dị n’ime ya video monetization n'elu ikpo okwu nke na-enye ndị ọchụnta ego vidiyo na ndị okike ikike ịtụkọta ọdịnaya ha ma wuo obodo na azụmaahịa na-aga nke ọma na vidiyo ha.
Tuesday, August 27, 2019 Tuesday, August 27, 2019 PJ Tai
Enwere ezigbo ihe kpatara ihe ntinye aha Video On Demand (SVOD) na-agbawa ugbu a: ọ bụ ihe ndị mmadụ chọrọ. Taa ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ ọdịnaya vidiyo nke ha nwere ike ịhọrọ ma lelee na-achọ, ma ọ bụghị ikiri ha mgbe niile. Na stats na-egosi na SVOD adịghị akwụsịlata. Ndị nyocha kọwara amụma uto ya iji ruo akara ngosi nde mmadụ 232 nde site na 2020 na US. A na-atụ anya ka ndị na-ele ihe nkiri ụwa gbaa na 411 nde site na 2022, site na 283